10 Uninzi lweekhosi zeScenic Golf eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Uninzi lweekhosi zeScenic Golf eYurophu
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
Iintlambo eziluhlaza eziluhlaza kunye neenduli, amadlelo amakhulu, kweyona ndawo intle eYurophu, la 10 uninzi lwezifundo zegalufa ezibukekayo eYurophu, zezinye zeeklabhu zegalufa eziphezulu kwihlabathi. Yonke ikhosi yegalufa yenzelwe ukufezekisa, indibaniselwano emangalisayo yezixhobo kunye nobuhle bendalo.
1. IGreen Blue Green Pleneuf-Val-Andre EBrittany
Ngeembono ezintle ze IsiNgesi Channel, Ibala legalufa leBluegreen Pleneuf Val Andre liyamangalisa. Ibala legalufa iBluegreen eBrittany yenye yezona ndawo zintle zegalufa eYurophu.
Ikhosi eluhlaza eluhlaza ijonge kunxweme lwaseBreton, Ukudityaniswa komhlaba oluhlaza kunye nolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka kuyamangalisa. Ukwengeza, uzakudlala kwenye 500 ezona khosi zegalufa zibalaseleyo emhlabeni.
2. Ikhosi eNtsha yaseScandinavia: Copenhagen
25 km ukusuka eCopenhagen, Ikhosi yegalufa eNtsha ikwinqanaba le- 50 iikhosi eziphezulu zegalufa eYurophu minyaka le. Ikhosi eNtsha enemingxunya engama-36 yenye yezona ndawo zibalaseleyo zegalufa eYurophu ezinazo 25 Iihektare zehlathi zijikeleze yona.
Imisinga ekhokelela kumadama endalo, indawo entle ezolileyo, kunye neklabhu yegalufa ephumelele amabhaso, uya kukothusa ukusuka ekungeneni kumngxuma wokuqala. Umhlaba mhle ngokunyanisekileyo kwaye uthabathe uninzi lwegalufa kwihlabathi liphela.
3. Amakhonkco eGalufa eCastletown: Isle of Man
Umoya wolwandle, iintyatyambo zasendle, kunye nemibono ye-epic ye-Isle of Man, ukudlala igalufa kwikhosi yegalufa yaseCastletown ngamava angalibalekiyo. I-Isle of Man yenye yezona ndawo zibalaseleyo eYurophu, kwaye igalufa yenye yezona ndawo zibalaseleyo zegalufa eYurophu.
Ujikelezwe lulwandle macala onke 3 amacala, njengoko udlala ikhosi kunxweme oluhle lweLangness. Unxweme olunamatye luzolula ulwandle, ukutshona kwelanga okuzukileyo, Isikhundla seCastletown Golf Links ye-8 kwezona ndawo zibalaseleyo zegalufa e-UK nase-Ireland. Umngxuma we-17 ujonge Ulwandle lwaseIreland, kunye nembono ukusuka kumngxuma we-18, imbali yaseSt. Michaels Isle, 12Ikhulu leminyaka ye-chapel, izimvo ezinokuphazamisa nayiphi na iigolfer enamava.
4. Iqela leTralee Golf: Ayalend
Beka kwindawo yendalo, ejonge uLwandlekazi lweAtlantic kunye nolwandle, Ibala legalufa laseTrelee eIreland lelinye lawona mabala egalufa ahlukileyo eYurophu. Uyakuleqa imingxunya kwiinduli eziluhlaza ujonge umbala oluhlaza okwesibhakabhaka phambi kwakho.
Le ndawo ibalaseleyo yemidlalo yegalufa engama-18 ikwiNdawo yeKerry, ikhaya laseDingle Peninsula, kunye neKillarney entle Ipaki yelizwe. Ibala legalufa lisetelwe kwimiphetho ye- amanxweme amangalisayo, nge-moorland eluhlaza kunye ne-iconic yoMzantsi-mpuma ye-Ireland.
5. Iiklabhu zeGalufa Crans-Sur-Sierre: Swizalend
Omnye wabadala, okwangoku kwaye ixhotyisiwe, Iigalufa eYurophu, Ikhosi yegalufa yeCrans-sur-Sierre eSwitzerland yenye yeeklabhu zegalufa ezibukekayo eYurophu. Amachibi endalo, ezintabeni, kwaye intlambo eluhlaza eluhlaza yaseSwitzerland iyamangalisa kwaye iyakha amandla.
Le khosi yegalufa intle kangaka kwiiAlps zaseSwitzerland, ke ubuhle bendalo buyamangalisa. Ngeembono zeMont Blanc kunye neMatterhorn, ezona ntaba ziphakamileyo nezintle eYurophu, Uya kumangaliswa yile galufa. Ikhosi yegalufa ye-Crans-sur-Sierre yi uhambo entle uloliwe kude eGeneva, kunye noBern.
6. Eyona Khosi yeNdawo yeHlabathi yeHlabathi eIreland: Intloko yeNdala yeGalufa
Uhleli phezulu kwiNtloko eNdala iKinsale, ingqongwe lulwandle, Ikhosi yegalufa yeKinsale ibonelela umbono obukekayo, ezona mbono zintle kuyo yonke iIreland nase-UK.
Ngamadlelo aluhlaza, umhlaba onqabileyo, kunye neembono zolwandle, ubume bendawo obumangalisayo baseIreland abuyeki ukumangalisa. ke, uya kumangaliswa ziiyadi ezimangalisayo kwikhosi yegalufa yeNtloko eNkulu. Uya kudlala igalufa kwi 350 ilitye lesanti elidala lesigidi, Ukutshintshela emantla ekuhambeni kwexesha. Le khosi yegalufa imangalisayo ikwisithili saseCork, ngenqanawa, ukuloba, ukudayiva emanzini, kunye nezinye ezininzi imisebenzi yangaphandle kubathandi bamanzi kweli zibuko likhuselekileyo.
7. Uninzi lweNdawo yeHlabathi yegalufa: Iqela lePasier Golf Meran South Tyrol
Iimbono zePanoramic zeentaba ezintle kakhulu eYurophu, Iklabhu yegalufa yePassier eMeran ibonelela ngamava angalibalekiyo kubadlali begalufa abaphambili. Ngaphezu, ngemimandla yaseTyrol yaseMzantsi, amachibi, bunkers, neenduli eziluhlaza, Iklabhu yegalufa yePasier inendawo entle kunye noyilo.
Ngaphezu, ibala legalufa 18 imingxuma isasazekile kumhlaba othambekileyo, namadlelo aluhlaza, ukutsala abagadi begalufa abavela kwihlabathi liphela ngempelaveki yegalufa, okanye uhambo olude lokubaleka kwindalo yaseTyrolian.
Trento ukuya eBolzano noLoliwe
EMilan ukuya eBolzano noLoliwe
I-Bologna iya eBolzano ngoLoliwe
IVenice ukuya eBolzano noLoliwe
8. Igalufa Eichenheim: Ostriya
Phakathi kwamahlathi ashinyeneyo eAlpine, Iikhabhathi zamaplanga zijikeleze, namadlelo, Ibala legalufa lase-Eichenheim yenye yezona ndawo zintle kakhulu zeYurophu. Umoya omtsha wealpine, amavumba endalo, kwaye ubukhazikhazi bendalo bukhuthaze abona badlali begalufa babalaseleyo emhlabeni. Ikhosi yegalufa i-Eichenheim inayo 18 imingxunya, isasazeke ngaphaya koku 6000 mitha.
Le khosi ibalaseleyo yegalufa yenye yezona klabhu zegalufa zibalaseleyo e-Austria, ngezinto eziluncedo kakhulu: isauna, amachibi angaphakathi nangaphandle okuphumla emva kwitumente yegalufa emnandi. Akukho nto injengobume be-alpine kunye neemeko ezintle zokuziqhelanisa nothando lwakho.
9. Iklabhu yelizwe yaseGardagolf: ElamaTaliyane
From Manerba-Fort of the palace of Soianoto the hills of Polpenazze and castle, the Gardagolf Club offers scenic views of olive trees and Lake Garda. Ikhosi yeGardagolf inayo 27 imingxunya, isasazeke 110 hectares, kwingingqi emangalisayo yeLombardia.
Le khosi intle yegalufa ijikelezwe ziinduli zaseValtenesi, ukubonelela ngeembono ezonwabisayo nezinomtsalane kwabona badlali begalufa baphambili nabazimiseleyo. Ikhosi ebomvu yeyona khosi intle eGardagolf, ngeentyatyambo kunye nemithi emide ejikeleze.
I-Trento ukuya kwiLake Garda Peschiera noLoliwe
IBolzano Bozen ukuya eLake Garda Peschiera ngoLoliwe
IBologna eLake Garda Peschiera Kunye noLoliwe
IVenice eLake Garda Peschiera Kunye noLoliwe
10. Ibala leGalufa laseAndermatt: Swizalend
Elinye igugu laseSwitzerland, ikhosi yegalufa iAndermatt ivale eyethu 10 uninzi lwezifundo zegalufa ezibukekayo kuluhlu lwaseYurophu. Ibala legalufa laseAndermatt likwintlambo entle yaseSwitzerland. Iincopho zeentaba zincamisa isibhakabhaka, iinduli eziluhlaza eziluhlaza, kunye ne-landscape yekhadi leposi.
Indawo entle kakhulu, ukuba nabona badlali bajolise kubo banokuphazanyiswa yintlambo entle yaseUrsern. Ibala legalufa laseAndermatt lenzelwe kakuhle ukuba yinxalenye yendalo kwaye li-eco-friendly. Uza kubona imilambo yamanzi kunye neentyatyambo ezifakwe ngokumangalisayo kwiigalufa. Nazi 18 imingxunya onokukhetha kuyo. Ukwengeza, Umoya onamandla wasentabeni ubeka umngeni kwigolfer enomdla, ukunyusa umdlalo wabo.
UBern waya kwi-Interlaken noLoliwe
Thina Gcina A Isitimela Uyakuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo oluya kube kanye ebomini 10 inkoliso izifundo zegalufa eYurophu ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "1o Uninzi lweekhosi zeGalufa zaseYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-scenic-golf-courses-europe%2F%3Flang%3Dxh< - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)